Yaan Ku Arkay Sheekadayda Barta Instagram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Kumaa sheekadayda ku arkay barta Instagram?
July 11, 2019 0 comments 2471
Instagram-ka waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu caansan xilligan, baaxaddiisu way ka sarreysaa sida aan u maleyno, iyo sidoo kale tirada isticmaaleyaasha adduunka oo dhan. Sababtaas awgeedna, waa in ay awoodaa Su’aasha ah yaa arkay sheekadeyda barta Instagram-ka. Dareenkan iyo sida qofkastaaba ku dhici karo ogaanshaha inay jiraan malaayiin dad ah oo ka dambeeya taleefanka gacanta, kiniin ama kombiyuutar si joogto ah dib u eegis ugu sameynaya madaldan.
Shakigani shaki ahaan waa mid aad u caadi ah sida ay iyaguna yihiin adigoo garanaya cidda arki kara macluumaadkaaga, sawiradaada, fiidyowyadaada iyo waxyaabaha aad soo geliso barta Instagram. Taasi waa sababta aan ugu talagalnay inaan wax ka barano qaar ka mid ah tabaha oo aan ku sharaxno qaar ka mid ah wararka laga yaabo inaadan aqoon, hoose.
Sida loo ogaado cidda aragtay sheekadayda ku jirta barta Instagram?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu ogaado cidda ka arki karta sheekooyinkaaga Instagram-ka, kaas oo sidoo kale ku tiirsan aaladda aad ku adeegsato dalabka. Laakiin guud ahaan, waxaan kuu sheegi karnaa taas sheekooyinka looma muujinayo dhamaan kuwa raacsan ee aad masraxa ku leedahay, laakiin waxay ku xadidan tahay oo keliya kuwa aad caadiyan la shaqeyso ama kuwa raaca dad tiro yar. Sidaa darteed, looma muujin doono dhammaantood.
Dareenkaas, waxaan ku tusi doonaa khadadka soo socda sida loo ogaado cidda aragtay sheekadayda Instagram-ka ee aad daabacday, iyadoo aan loo eegin tirada dadka raacsan.
Qaabka koowaad ee lagu ogaado cidda aragtay sheekadayda Instagram
Si aad u bilowdo waxaad u baahan tahay inaad ka furato koontadaada Instagram barnaamijka. Goor dambe waad awoodaa Ku daabac nuxurka aad ka rabto astaanta kamaradda, kaas oo ku yaal dhinaca bidix ee shaashadda. Kadib, riix masawirkaaga astaanta guud, kaasoo u muuqda qaybta hore ee sheekooyinka la baahiyay.
Kadib sheekada aad hada daabacday ayaa furi doonta, waa meesha aad ka dooran karto bidixda hoose sawirada isticmaaleyaasha horey u daawaday sheekadaada. Laakiin kiiska qofna uusan kuu muuqan, waa sababta oo ah inuusan isticmaale xitaa arag aragtida aad soo gelisay, sidaa darteed waa inaad wax yar sugtaa.
Marka tabku furmo waxaad arki kartaa kuwa isticmaala isticmaaley sheekadaada, ama tiro ahaan baararka bidix ee kore, iyo sidoo kale halka ugu hooseysa halka magacyada isticmaaleyaasha arkay ay si toos ah uga muuqdaan.
Sidaad arki karto, waa nidaam aad u fudud oo fudud oo aad dalban karto markaad rabto inaad ogaato waxa indhihiisu u jeediyeen aragtidooda ku saabsan sheekooyinka aad ku dhejiso shabakadan bulshada. Laakiin sidoo kale waa inaad maskaxda ku haysaa inay jiraan adeegsadeyaal aan ku raacayn Waxay waliba arki karaan waxyaabahaaga haddii aad isticmaasho koonto guud.
Hadda waxaan ku tusi doonaa ikhtiyaar labaad oo aad sidoo kale dalban karto.
Qaabka labaad ee lagu ogaan karo cidda sheekadayda ku aragtay barta Instagram
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ka furatid koontadaada Instagram barnaamijka isla markaana aad sheeko u gasho haddii aadan horay u sameynin, intaa kadib waa inaad furaysaa waxa aad hada daabacday, oo aad sameyn karto adoo xushaya sawirkaaga astaanta qaybta ama sheekada.
Qaab kale oo tan lagu sameeyo ayaa ah in si toos ah looga helo boggaaga, adoo gujinaya masawirkaaga midig hoose iyo mar labaad, adigoo ku xulanaya astaantaada. Sidan, sheekada aad horey u daabacday way furi doontaa, markan waa inaad ku wareeji shaashadda hoose ilaa sare oo tab kale ayaa furmi doona. Sidaas darteed, waxaa lagu tusi doonaa liiska dadka leh dhammaan adeegsadayaasha daawaday sheekooyinkaaga.
Sida kii hore, qaabkani waa mid aad u fudud in la fuliyo waana ku dhex arki kartaa wadarta guud ee kuwa galay sheekooyinkaaga. Dareenkan waxaan ku tusaynaa hoosta qaab kale oo aad ku fuliso hawsha.
Habka saddexaad ee ogaanshaha cidda sheekadayda ku aragtay barta Instagram
Si aad u bilowdo, si la mid ah kuwii aad ku sameysay kuwii hore, waa inaad furataa bogga Instagram, iyada oo farqiga u dhexeeya markan ay kombiyuutarkaaga noqon doonto. Ta labaad, taabo sawirka astaanta ee qaybta taariikhda oo laga helay cajalad ahaan qeybta wararka. Mar dambe, dooro sawirkaaga markale sheekooyinka aad daabacdayna waa la sii furi karaa ka hor kan hadda jira.
Markaad sameyso, waxaad ku ogaan kartaa in bidixda hoose aad ka heli doonto Soosaar sawirada dadka arkay sheekadaada. Waxaa ku xigta tan, waa inaad riixdo si uu kuugu jiheeyo tab pop-up ah oo la yiraahdo "daawadayaasha" halkaas ayey ku yaalliin dhammaan adeegsadayaasha arkay waxyaabaha aad ku daabaceyso sheekooyinka.
Hawshani sidoo kale waa mid aad u fudud oo wax ku ool ah, taas oo aad ku guuleysan karto hawshaada. Laakiin weli waxaa jira midkii ugu dambeeyay ee la kulma kuwa arka sheekooyinkayaga.
Si aad u bilowdo waa inaad furataa koontadaada adiga oo adeegsanaya magacaaga iyo eraygaaga sirta ah, sidaad maalin walba sameyso. Goor dambe waxaad horey ugu jiri doontaa shabakada bulshada waxaadna arki kartaa howlaha uu qabanayo, bidixda kore ee bidix waxaa ku yaal goob goobeed leh sawirkaaga sawirka oo oranaya "Sheekadaada" waana inaad riixdaa.
Waxa ugu horreeya ee soo muuqan doona ayaa ah sheekada aad soo gelisay, ka dibna fartaada saar oo hoos u dhig. Laakiin waa inaad tixgelisaa taas markii aad sheegeysid furitaanka sheekada waxay socon doontaa ilbidhiqsiyo iyo in dhaqdhaqaaqa is-riixitaanka Waa inay ahaato mid dhakhso badan si markaa nuxurka aad rabto inaad dib u eegto uusan xirmin. Markaad sidaas sameyso, waxaa lagu tusi doonaa dhammaan adeegsadayaasha arkay daabacaadan.
Dhamaan howlahaan aan kuu sharaxnay qof kasta wuu sameyn karaa isagoon wax dhibaato ah qabin oo sidan ayaad si furan ugu farxi kartaa sheekooyinka adigoo og cidda soo aragtay.
Laakiin haddii aysan ku filnayn in la ogaado cidda aragtay sheekadaada laakiin sidoo kale rabto inaad xakameyso oo aad doorato cidda arki kara ama aan arki karin, waxaan ku tusi doonnaa khadadka soo socda sida looga jawaabo fikradaada.
Sida loo qariyo sheekadayda Instagram?
Waxaa jira dalabyo iyo khiyaamo badan oo internetka ah oo sheegaya inay ku tusi karaan kuwa arki kara sheekooyinkaaga iyo xitaa raadraaca, laakiin runtii waa been abuur, Waxaa jira laba dariiqo oo keliya oo loogu qariyo sheekooyinka dadka loo oggol yahay barta Instagram.
Qari taariikhda guud ahaan
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad aaddaa astaantaada oo aad taabataa saddexda xariiq ee toosan ee ku yaal midigta sare. Taas ka dib, taabto dejimaha oo dooro "Asturnaanta sheekooyinka", markaa waa inaad riixdaa tirada dadka ku xiga Taariikhda ku qari ... " Markii la dhammeeyo, xulo dadka aad rabto inaad ka qarsato sheekada oo taabato, ficilkan waxaa lagu laaban karaa iyadoo lagu soo celinayo nidaamka.
Qari taariikhda si gaar ah
Sidan oo kale ayaad u dooran kartaa dad aad rabto inaad qarsato sheekada inta aad la tashanayso cidda aragtida ka bixisay. Haddii aad isticmaasho nidaamka qalliinka macruufka waa inaad riixdaa saddexda qodob ee safka hore loo geliyo, marka la eego Android dhibcuhu waa toosan yihiin, ka dib markaad riixdo xulashada, midigta magaca waxaad dooran kartaa "qariso taariikhda ..."
Dhanka kale, haddii sheekada ku taal bog hashtag ama goob, waxaad ka arki kartaa meesha ugu sarreysa liiska dadka arkay sheekadaada. Iyo inaad ku qariso sheekadaada boggaas, waad taaban kartaa "x" kaas oo ku yaal midigta bogga.
Waa inaad sidoo kale tixgelisaa inaad qarineyso sheekada qof ama dhowr qof ma metelo xannibaadahooda, sidaa daraadeed isticmaaleyaashani waxay sii wadi doonaan inay helaan marinka boggaaga Instagram iyo dhejinta aad si caadi ah u geliso.
Dejinta aad siiso koontadaada waxay kaloo saameyn ku yeelan kartaa cidda arki kartaa sheekooyinkaaga, sababta oo ah hadaad leedahay koonto gaar ah, dadkaas aad u ogolaatay inay kaa raacaan ayaa arki kara. In kasta oo haddii akoonku yahay mid dadweyne, kuwa raacsan iyo adeegsadayaashaada aan raacin waad arki kartaa laakiin waad arki kartaa astaantaada, marka lagu daro qof kasta oo kula sameeyay Diret.
Ma fiicantahay in la ogaado cidda aragtay sheekadayda ku jirta barta Instagram?
Jawaabta su'aashani waxay kuxirantahay habka weyn ee sababta aad u rabto inaad u qariso sheekadaada, Waan ogahay sababta aad u rabto inaad qof ka yaabiso oo aadan u rabin iyada inay aragto waxa aad soo dejiso, ama sababta oo ah qof ayaa u isticmaalaya qoraalladaada inuu ku dhigo bog kale. Marka lagu daro kiisaska caadiga ah ee kadeediska ama dhaleeceynta ay dadka qaarkiis helaan.
Mid ka mid ah kiisaska kor ku xusan, ikhtiyaarka ah inaad ku qariso sheekadaada waxay xal u noqon kartaa dhibaatooyinkaaga, maadaama ay adiga kuu oggolaanayso Waxaad gacanta ku haysaa muuqaallada dhammaan waxyaabaha aad soo dejiso. Sidaa darteed, mar dambe ma noqon doonto cidda noqon doonta laakiin cidda aad u oggolaaneyso inaad ka mid noqoto waxa aad ku wadaagto barta Instagram.
1 Sida loo ogaado cidda aragtay sheekadayda ku jirta barta Instagram?
1.1 Qaabka koowaad ee lagu ogaado cidda aragtay sheekadayda Instagram
1.2 Qaabka labaad ee lagu ogaan karo cidda sheekadayda ku aragtay barta Instagram
1.3 Habka saddexaad ee ogaanshaha cidda sheekadayda ku aragtay barta Instagram
1.4 Foomka afraad
2 Sida loo qariyo sheekadayda Instagram?
2.1 Qari taariikhda guud ahaan
2.2 Qari taariikhda si gaar ah
3 Ma fiicantahay in la ogaado cidda aragtay sheekadayda ku jirta barta Instagram?
Markuu Instagram ka saaro waxyaabaha jecel
La soco barta Instagram